Agricultural Seat, Industrial Seat, traktọ Seat - TFS
Pictures of ụlọ mmepụta ihe na
TFS, na-anọchite anya otu ìgwè nke ụlọ mmepụta ihe na China, gụnyere oche & akụrụngwa akụkụ Nsukka, na-arụpụta a sara mbara akara oche adabara niile iche iche nke Motor Vehicle, gụnyere traktọ, Agricultural, Construction, Industrial, Lawn & Garden, Professional Turf, na Utility ngwá ngwa. The oche akara na-agụnye ọtụtụ ụdị nke na-ewu ewu oche nakwa dị ka ụfọdụ nke oge a oche aghụghọ na pụrụ iche na anya na atụmatụ
A ike oru otu na-arụ ọrụ maka afọ 20 nke oche mmepụta akụkọ ihe mere eme, na-eme ọhụrụ oche imewe na na n'otu oge ahụ nọgidere ka enlarge mmepụta ike. Taa atọ tent nke mmepụta akara maka na-asụ ụfụfụ, karịsịa gosiri na nkà na ụzụ na-agbasa site na kpụrụ ákwà kụziri vinyl nke na-etinyere maka elu klas oche. Mmepụta akara na-agụnye ezu nhazi oche, dị ka, machining, zọ, nakwa dị ka ịgbado ọkụ, na egosipụta, mgbakọ. Ewezuga n'elu kwuru banyere, tooling a mere anyị onwe anyị, nwere nnukwu stamping, plastic & ụfụfụ Ebu.
The ngwaahịa mbupụ na United States, Japan na mba ndị ọzọ, n'otu oge ọrụ na anụ ụlọ nnukwu ugbo ígwè na ngwá ụlọ ọrụ.
Oche anyị na-ọtụtụ-eji agriculture, ewu, ụlọ ọrụ, ahịhịa & n'ogige, ọhụrụ imewe kwekọrọ n'ụzọ dị mma-na-achọ, nke ọma, na nchekwa na withstanding kwa ụbọchị ọjọọ na aka ike na gburugburu ebe obibi na ọnọdụ.
Anyị factory na-certificated ISO9001 ụkpụrụ, na OA akwụkwọ, iji hụ na anyị oche ịnọgide na-enwe na-agbanwe agbanwe àgwà choro OEMs.
Anwale lab nwere ike izute ule maka oche, gụnyere ike, na-adọgbu adọgbu, nnu ịgba, UV, flammability, abrasion, durometer anwale, wdg
Ọ bụrụ na ị na-achọ a pụrụ ịdabere na àgwà soplaya, ma ọ bụ mmasị na otu nke anyị ngwaahịa, biko kpọtụrụ anyị otu izute gị mkpa.
10 Ọkt 2019 New CNC achịkwa igwe maka ịkpụzi-abịa n'ime anyị workshop.CNC ka ukwuu mma na ngwaahịa mmepe ike na mmepe na-agba, na-enyere mmepe nke ụlọ ọrụ 02 Nov. 2019 T ...
Ukwuu Njem Seat , N'azụ Seat , Universal Seat Slide Okporo ígwè , Anti-Ileghara Gun aiming Seat , ịkpakọba Seat , Hardware Torsion Metal Waya clamps ,